အင်္ဂါသားသမီးတို့၏ စရိုက်နှင့် စိတ်နေစိတ်ထားများ – Popinvdo
အင်္ဂါတွေဟာ အပြင်ပန်း သဏ္ဍန် တည်ငြိမ် အေးဆေးစွာနဲ့ နေတတ်ကြပေမဲ့ အင်မတန်မှ ဒေါသကြီးတဲ့ နေ့နာမ်တွေ ဖြစ်ကြတယ်… မဟုတ်ရင် မခံချင်ကြဘူး။ ဒေါသဖြစ်ရင် အပြင်မှာ ပေါက်ကွဲကြတာထက် ပါးစပ်က ပူညံပူညံနဲ့ ရေရွတ်နေ တတ်ကြတယ်… လူတွေအပေါ် ဖော်ရွေစွာနဲ့ ခင်မင်တတ်ပါတယ်… ဝတ္တရား ပျက်ကွက်မိ ရင်လည်း အပြန်ပြန်အလှန်လှန် တွေးပူနေတတ်ကြတယ်…
မိသားစုတွေ အပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးချင်တဲ့ စိတ်တွေ ရှိကြတယ်… တည်ငြိမ် အေးချမ်းတဲ့ ပုံစံမျိုးပေမဲ့ တခါတလေ မိသားစုထဲမှာ ပေါကြောင်ကြောင် နိုင်တတ်ကြတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ သူများအပေါ် ဦးဆောင်လိုတဲ့စိတ် ရှိတယ်။ ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်အကောင်းလို့ ထင်မြင်တတ်ကြတာ အင်္ဂါ…
အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားတတ်ကြတယ်… အင်္ဂါတွေဟာ ကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝ ရှိတယ်. . တခါတရံ ကိုယ့်ကိုယ်ပင် ချီးမွမ်းတတ်တယ်.. သူများတွေ မြှောက်ပေးရင်တော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး.. အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်ကြတာ အင်္ဂါပါ။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ အပြုံးတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်. .
ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့လူ ဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့ မမေ့တတ်သလောက် ကိုယ့် အပေါ် မကောင်းတဲ့လူဆိုရင်တော့ တသက်လုံး ပြန်လှည့် မကြည့်တတ်ကြဘူး… အင်္ဂါတွေဟာ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အသည်းယားစွာနဲ့ ချစ်တတ်ကြတယ်.. အိမ်မက် ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ မက်ရင် သူငယ်ချင်းတွေကို သို့မဟုတ် မိသားစုထဲက လူတစ်ယောက်ယောက်ကို ပြန်လည်ပြီး ပြောပြချင်တတ်ကြတယ်. .
ဝမ်းနည်းစရာ တစ်ခုခုနဲ့ကြုံရင် မျက်ရည် လွယ်တတ်ကြတာ အင်္ဂါပါ… တော်ရုံနဲ့ မမေ့တတ်ကြဘူး။ သို့ပေမဲ့ မေ့ပြီးသွားရင်လည်း သူမဟုတ်သလိုပဲ အသစ်တဖန် ပြန်စတတ်ကြတယ်… သူများအပေါ်မှာ ကူညီပေးချင်တဲ့စိတ် အပြည့်အဝရှိတယ်… အားနာတတ်တယ်။ စကားပြောရင်လည်း သူများနားလည်အောင် ရှင်းလင်းစွာနဲ့ ပြောပြတတ်ကြတယ်… အမှတ်တရ တွေကိုတော့ တခုမကျန် မမေ့တတ်တာ အင်္ဂါပါပဲ… သီချင်းအေးအေးလေးတွေဆို တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ နေရာမှာ တိုးတိုးတိတ်တိတ် နားကျပ်နဲ့ နားထောင်နေရတာတွေကို နှစ်သက်ကြတာအင်္ဂါပါ…
အင်္ဂါသားသမီး​လေး​တွေဟာ အမြင်​မှာ မထူးဆန်းဘူး ထင်​ရ​ပေမဲ့ တကယ်​​ ​တော့ အများနှင့် မတူတဲ့အချက်​​တွေကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားသူ​တွေပါ.. သူတို့ဟာ အ​နေ​အေးတယ်​…. အရှက်​အ​ကြောက်​ကြီးတယ်​…စိတ်​ရင်း ​ကောင်း​သ​လောက်​ အားနာလည်း ကြီးတတ်​ကြတယ်​။ လူစ်ိမ်း​တွေနဲ့ဆို မာနကြီးသလိုလို ​နေတတ်​ကြ​ပေမဲ့ သူတို့နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ သူ​တွေနဲ့ကြ​တော့ က​လေး​လေး တစ်​​ယောက်​လို အမြဲ ​ပျော်​ရွှင်​​နေတတ် ​ကြတယ်​….
ရိုးသားကြတယ်​…. များ​သောအားဖြင့် စကားနည်းတယ်​… လူအများကြီး ​ရှေ့မှာဆို စကားသိပ်​မ​ပြော ​ပေမဲ့… သူတို့ ရင်းနှီးတဲ့ သူ​တွေနဲ့ဆို ​ဖောင်​ဖွဲ့​အောင်​ ​ပြော​နေတတ် ​တဲ့သူမျိုး…. ရိုးရိုး​လေး ​နေရတာကို သ​ဘောကျတယ်​.. ဒါပေမဲ့ ​ခေတ်​နဲ့ ​လျော်​ညီအောင်​လည်း ဝတ်​တတ် ​စားတတ်​ ​နေတတ် ​ထိုင်​တတ်​ကြတယ်​..
အချစ်​​ရေးမှာ ကံ​ကောင်းကြတယ်​… ချစ်​သူခင်​သူလည်း ​ပေါတယ်​… ချစ်​သူရဲ့ အလိုလိုက်​ခြင်းကိုလည်း ခံရတတ်​တယ်​.. တကယ်​ချစ် ​တဲ့သူနဲ့ပဲ လက်​ထပ်​ရလိမ့်​မယ်​….. ရည်းစားမများဘူး ဆို​ပေမဲ့ နှစ်​​​ယောက်​ သုံး​ယောက်​ ထားပြီးမှ အချစ်​စစ်​ကို ​တွေ့လိမ့်​မယ်​… သူတို့ကို ခင်​တဲ့သူ ​ပေါကြတယ်​… အထူးသဖြင့်​ သူတို့​လေး​တွေရဲ့ ရိုးသားခြင်းကို သ ​ဘောကျပြီး မိတ်​​ဆွေ​ပေါတာ ဖြစ်​တယ်​….
အနုပညာကို နှစ်​သက်​တယ်​ အရမ်းကြီး​တော့ မရူးသွပ်​ဘူး… ဘယ်​အရာကိုဖြစ်​ဖြစ်​ အရမ်းကြီး အစွဲအလန်းမထားဘူး…​ ဒါ့​ကြောင့်​ သိပ်​ပြီး မခံစားရတတ်ဘူး… အထူးသဖြင့်​ သူတို့​လေး​တွေက အလုပ်​လုပ်​ရမှာ ပျင်းတတ် ​ကြတယ်​.. ဒါ​ပေမဲ့ သူတို့ စိတ်​ရှိတဲ့ အချိန်​ဆိုလည်း မငြီးမငြူ လုပ်​တတ် ​ကြတယ်​…
အအိပ်​မက်​တယ်​ … အစားမကြီးဘူး ဆို​ပေမဲ့ အသင့်​အတင့်​ စားတတ်​တဲ့သူမျိုး.. သူတို့​လေး​တွေဟာ အရမ်းရိုးသား ကြတဲ့အတွက်​ ချစ်​စရာ ​ကောင်းကြတယ်​… မိသားစုမှာ သူတို့​လေး​တွေက အ​ရေး ​ပေးခံရတယ်​… အထူးခြား​ဆုံးက​တော့ သူများ​တွေထက်​ ရိုးသားတာ ​ကြောင့်​… လူချစ်​လူခင် ​​ပေါကြတယ်​…
မှန်​ရင်​ Like ၊ share ​ပေးသွားပါ
Previous Article သိန်းပေါင်း(၄၀၇)သိန်းဖိုးလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြား လမ်းမီးများနှင့်CCTV များလှူတဲ့ မွေး​နေ့ကုသိုလ်ရှင်
Next Article တရားစခန်း ဝင်သွားပြီ ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်